Global Voices teny Malagasy » Fikatonan’ny Google Reader: Toetra Ratsin’ny Google? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2013 9:30 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i Sally Seward, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Espaina, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nanambara  ny Google tamin'ny herinandro lasa fa hakatony amin'ny 1 Jolay ny tolotra mpamaky fahana RSS  fanomeny, fantatra amin'ny hoe Google Reader .
Google Reader, tahaka ireo mpamaky fahana hafa rehetra (RSS na Atom , indrindra indrindra) dia fomba iray tena mora ampiasaina hanarahana akaiky ireo votoaty navoakan'ny bilaogy na tranonkala manana io fahafahana io. Tao anatinà fanambaràna iray farany dia nanampy  ny Google hoe :
Antony roa tsotra kely no mahatonga an'io : nihena ny fampiasàna ny Google Reader, ary amin'ny maha orinasa anay be loatra ny angovo narotsakay ho anà vokatra tsy dia manao ahoana. Heverinay fa ny karazam-pifantohana toy izany dia hiteraka fihatsaran'ny fomba fampiasa ho an'ireo mpampiasa Google.
Ao amin'ny bilaogy Alt1040 miresaka momba ny teknolojia, manontany tena i Javier Lacort raha toa ka tena tolotra mandany vola nefa tsy dia misy mampiasa loatra izy io, ary tondroiny ilay tolotra ho  [es] toy ny :
hetsika mahagaga, indrindra raha jerena ny isan'ireo olona mampiasa ity tolotra ity isanandro. Etsy ankilany, marina fa efa fotoana ela ihany izay no nanaovan-dry zareo fampanarahana toetrandro an'ilay tolotra, ary nisy mihitsy aza fampiasa vitsivitsy notsoahan-dry zareo, toy ny Share(Zarao) na Like(Tiana). […] Ny olana dia indraindray ny Google manao hetsika izay somary sarotra takarina. Ambonin'izany rehetra izany, vao haingana, fony ry zareo nifototra tamin'ny fampiakarana ny fampiasana ny Google+ tamin'ny fomba rehetra. Amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny fanakatonana ny Google Reader, dia efa fanaovana veloma ihany koa ny tolotra iray isan'ny be mpampiasa indrindra eo amin'ny fiainana andavanandron'ireo mpampiasa. Ary ny tena ratsy indrindra dia ny fanerena ireny mpampiasa ireny ihany hanao veloma azy ity.
Saingy tena marina ve fa tolotra iray mitontongana ny fampiasàna azy ity e? Ao amin'ny “Geek's Room” naverin-dry zareo navoaka ny  [es] tatitra iray avy amin'ny Buzzfeed Network  izay maneho fa ny Google Reader no mbola mamokatra todika betsaka kokoa noho ny Google+ (raha hiresaka vokatra avy aminà orinasa iray ihany), izay azo jerena ato anatin'ity kisary manaraka ity:
Lazain'i Enrique Dans ho fitaovana iray tsy hisy hahasolo azy ny Google Reader, na dia nataony mazava tsara aza fa tsy mihevitra azy ity ho vokatra iray natao ho an'ny daholobe izy ity, fa iray izay natodika ho an'ireo mpampiasa izay “efa lasa lavitra amin'ny fifandraisan'izy ireny amin'ny resaka seraseram-baovao”, ary manontany tena  [es] izy mikasika ny mety ho fahelàna velon'izy ity ao anatin'ny vanim-potoan'ny tambajotra socialy :
Efa lasa mahazatra izao ny fikarokarohana vaovao amin'ny alàlan'ny Facebook na Twitter. Kanefa, ny hihevitra hanolo ny Reader amin'ny iray amin'ireny fitaovana ireny dia midika fiatrehana tontolo iray faran'izay tsy alehany, izay miankina betsaka amin'ireo dingan'ny zava-baovao eo amin'ny sosialy. Rehefa anananao amin'ny endrika tsotra sy tonga dia azo raisina avy hatrany ny loharano, dia efa tena zavatra hafa tsotra kely mihitsy izay: vintana ho an'ireo izay “efa eo amin'ny toerana” misy ilay vaovao, fa tsy ho an'ireo izay “mikatsaka azy”.
Tsy nitazam-potsiny ilay fanambaràn'ny Google ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa azy, ary dia porofon'izany ny fanangonan-tsonia iray ao amin'ny Change.org  izay efa nahangona maherin'ny sonia 141.555 mitaky ny tsy hanakatonana ilay tolotra.
Maneho hevitra  [es] ao amin'ny Fayerwayer i Cony Sturm hoe ireo tolotra hafa izay niankina tamin'ny Google Reader koa, toy ny FeedDemon , dia nanambara ny fikatonan-dry zareo  noho ny fiankinany betsaka tamin'ny foto-drafitrasan'ny Google. Nandika ho amin'ny fiteny Espaniôla ny ampahany tamin'ilay taratasy fitarainana nataon'i Daniel Lewis ho an'ny Google nampandalovina tamin'ny Change.org ihany koa izy:
“Ny fitokisanay ireo vokatra hafa an'ny Google – Gmail, YouTube, ary eny, mety mihoatra noho izany – dia ilàna ny hoe matoky anareo izahay amin'ny fanajàna ny fomba sy ny antony ampiasànay ireo vokatrareo hafa. Tsy hoe noho ny angon-drakitray ao amin'ny Reader fotsiny izy ity. Fa momba anay mampiasa ny vokatrareo satria tianay ilay izy, satria mampivoatra ny fiainanay ilay izy, ary satria matoky izahay fa tsy ho hapoakanareo izy io”, hoy izy manoratra. “Noho izany, miangavy aza potehina izay fitokisana izay.”
Nefa raha sanatria tsy mahomby io, tsy maintsy mitady fanolo isika, toy ny nataon'i Bárbara Pavan tao amin'ny Bitelia, toerana amoahany  [es] lisitra iray misy fanolo 10 ho an'ny Google Reader (Pavan ihany koa dia mizara lisitra fohy  izay akaikikaiky kokoa)
Raha ny marina, ny kaompania sasany toy ny Digg dia nanambàra  [es] fa halain-dry zareo tàhaka ilay tolotra. Ka na dia hanakatona ny fahana Reader aza ny Google, tsy midika ho fahafatesana ho an'ilay endrika nahazatra izany, izay ny fananganana azy dia nandraisan'itompokolahy Aaron Swartz  anjara izay vao haingana no nodimandry.
Ny nanjary nibaribary indray izao dia ny tsy fitovian'ny fahalinana sy ny tombontsoan'ireo mpampiasa sy ny an'ny orinasa, ary , araka ny lazain'i Enrique Dans ao amin'ilay lahatsoratra notanisaina tery aloha:
Miaraka amin'ny fanakatonana ny Google Reader, dia mampiseho ny toetra ratsiny ny Google: ny tsy firaharahiana ny mpampiasa azy. Ny endrika orinasa iray izay tsy ho azonao itokiana velively. Ny sasany mahita ilay fikatonana ho tsy azo ihodivirana , nefa ny fanesorana fitaovana iray manana mpampiasa miraiki-po tahaka izany, tsy misy akory na dia tolo-kevitra mendrika ho sainina hanoloana azy aza, dia fomba iray hanehoana fa tsy misy raharahanao mihitsy ny amin'ireo mpampiasa ireo, fa tsy misy na kely aza mampiasa loha anao mikasika azy ireo.
Aza mba ratsy saina e .
Ny lahatsoratra orizinaly dia navoaka tao amin'ny bilaogy Globalizado  [es] an'i Juan Arellano .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/27/47143/
 Google Reader: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Reader
 tondroiny ilay tolotra ho: http://alt1040.com/2013/03/cierre-de-google-reader
 naverin-dry zareo navoaka ny : http://geeksroom.com/2013/03/estudio-muestra-que-google-reader-produce-muchisimo-mas-trafico-que-google/72872/
 manontany tena: http://www.enriquedans.com/2013/03/google-y-el-desprecio-a-sus-usuarios-el-cierre-de-google-reader.html
 fanangonan-tsonia iray ao amin'ny Change.org: https://www.change.org/petitions/google-keep-google-reader-running
 Maneho hevitra: http://www.fayerwayer.com/2013/03/usuarios-protestan-ante-el-cierre-de-google-reader/
 fikatonan-dry zareo: http://nick.typepad.com/blog/2013/03/the-end-of-feeddemon.html
 lisitra fohy: http://bitelia.com/2013/03/alternativas-a-google-reader
 Aza mba ratsy saina e: http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil